Maxkamadda ICJ oo ku dhawaaqday jadwalka dhegeysiga dacwadda Somalia-Kenya | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Maxkamadda ICJ oo ku dhawaaqday jadwalka dhegeysiga dacwadda Somalia-Kenya
(Hague) 01 Maarso 2021 – Maxkamadda ICJ waxay hadda ku dhawaaqday in dhegeysiga dacwadda Soomaaliya ee ka dhanka ah Kenya ee soohdinta Badda ee labada dal uu billaaban doono Isniinta 15-ka bishaan Maarso, 3-da galabnimo wakhtiga Hague.
Maxakamaddu waxay sheegtay oo kale in Covid awgiis dhegeysiga dacwaddu uu isugu jiri doono online iyo goobjoog. Xubnaha Maxkamadda qaar ayaa soo xaadiri doona, qaar kalena video online ah ayay uga qeyb geli doonaan.
Ergooyinka labada dalna waxay ahaan karaan Online ama goobjoog.
Waxaa Diyaariyey: Yuusuf Garaad
Previous articleMadaxwaynihii Faransiiska oo xabsi lagu xukumay & lugta oo laga xiri doono
Next articleTOOS u daawo: Real Madrid vs Real Sociedad, Everton vs Southampton – LIVE (Shaxda Sugan)